San Htun's Diary: April 2011
ထိုင်ခုံက ထိုင်ရတာ အဆင်မပြေဘူး၊ ထမင်းစားခန်:ထဲကို ရေဘူး သယ်ခွင့် မပေးတော. ဘယ်လိုလုပ် ရေနွေးရမလဲ၊ ဓာတ်လှေကားက နှေးတယ်၊ TMချိန်မှာ relax ဖြစ်ဖို. ဖွင့်တဲ. သီချင်းက relax မဖြစ်စေဘဲ annoy ဖြစ်တယ်၊ အမွှေးတိုင်နံ. မခံနိုင်ဘူးနဲ. ကွန်ပလိမ်:တက်တဲ. စန်:ထွန်းကို သူငယ်ချင်းတွေက သင့်လျော်တဲ.နာမည် ပေးထားတယ် complaint grilတဲ.။ ကိုယ်.ကိုကိုယ် သထိမထားမိတာ မမှန်ပါ။
စင်ကာပူ serviceက ကောင်းသလို စလုံးတွေကလည်: ကွန်ပလိမ်:များပါတယ်။ 5cents မပေးလို့ ကွန်ပလိမ်:တက်တဲ. customer ။ Star Hub iphone လိုင်းက MRT မှာ မမိလို့ ကွန်ပလိမ်:တက်တာ 15% discount ရတယ်။ ဒါတွေကပဲ ကွန်ပလိမ်: တက်ဖို. အားပေးနေသလားမသိ။ ကွန်ပလိမ်:က service ကို ပိုကောင်းစေပေမယ်. လူတွေကို ကွန်ပလိမ်:တက်ဖို. အားပေးစေတာလားမသိ။ မြန်မာပြည်ကိုပဲကြည့် ကွန်ပလိမ်:တက်ဖို. အားမပေးတော. ကွန်ပလိမ်: ဆိုတာ ဘာမှန်:တောင် မသိလို့ တက်ရကောင်းမှန်:လည်: မသိ။ ကွန်ပလိမ်:တက်တဲ. စလုံးတွေကို အမြင်ကတ်သလောက် လား လာ: ကိုယ်ကိုတိုင်လည်: အမြင်ကတ်လောက်အောင် ကွန်ပလိမ်:တက်တတ်နေပါရောလား။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ကွန်ပလိမ်:တက်ဖို. ဝေး စပယ်ရာ အအော်အငေါက်ခံရတဲ. သူပါ။ စင်ကာပူမှာ ၃နှစ်လောက် နေပြီးချိန်မှာ ကွန်ပလိမ်:တက်တတ်နေပါရောလား။ တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုတာ အမှန်ပါရောလား။
Clementi အိမ်အောက်ထပ်က အဖိုးကြီ:က ကွန်ပလိမ်:များပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ရောက်ခါစ ကောင်မလေးတွေ အဝတ်ရေစင်အောင် မညစ်ဘဲ လှမ်:တာ ရေကျလို့ ချက်ချင်းတက်လာပြီ: ပြောတယ်။ သာ:လေး ဂေါ်လီလိမ့်တာ တောက်တောက်မြည်လို့ တက်လာပြောတယ်။ အိမ်တံခါးကို နည်:နည်:လေး ထုလိုက်တာနဲ. တက်လာပြီ: ပြောတယ်။ airconက ရေကျလို့ လာပြောတယ်။ service ခေါ်ပြီ: ပြင်ထားတယ် ဆိုတာ လက်မခံဘဲ HDB ကို တိုင်လို့ HDB က လာစစ်သေးတယ်။ အိမ်ရှင်ကို ပြောပြတော. အိမ်ရှင်က နားလည်ပါတယ်။ တော်တော် အားပြီ: တော်တော်လည်: ကွန်ပလိမ်:တက်နိုင်တဲ. အဖိုးကြီး။ ယောက်ျားလေးဆိုလို့ သားလေ:တယောက်တည်: ရှိပြီ: အားလုံးက အလန်:လေးတွေမို့ စကားပြောချင် ရှာတယ်နဲ. တူပါရဲ.။ တခါ မူးပြီ: မူးပြီ: သောင်းကျန်:နေတဲ. ကုလားက နင်တို. သူငယ်ချင်းလား မဆီမဆိုင်လာမေးလို့ ငါတို. သူငယ်ချင်း ကုလားမရှိဘူး၊ ဘေးမှာတော. ကုလားတွေရှိတယ်၊ သွားမေးလို့ အော်ထုတ်မှ အသာလေး လစ်သွားရှာတယ်.။ ဘေးအိမ်က ကုလားတွေ မနက်အစောကြီး ၆နာရီလောက် တံခါးကို ထုနေတာ အိပ်မရလို့ "Too noisy. Cannot sleep." လို. အော်မှပဲ ထုတာ ရပ်တော.တယ်။ ကွန်ပလိမ်:ဆိုတာလည်: တက်သင့်တဲ. နေရာမှာ တက်ရင် အကျိုးရှိပါတယ်။
Bedokက အိမ်ရှင် မဝါက USက သူ့ ကွန်ပလိမ်:အတွေ့အကြုံကို ဒီလိုလေး share ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်က တိုက်ခန်:မှာ ကြိုးခုန်တာ ရဲရောက်လာမှပဲ သိတော. တယ် အောက်ထပ်က ကွန်ပလိမ်:တက်မှန်:။ USမှာတော. ကိုယ်တိုင်ကိုကျ တက်လာပြီ: ကွန်ပလိမ်:တက်စရာ မလိုပါဘူး။ ရဲကို ခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူငယ်ချင်း ထိန်ထိန်ကတော. ပြောပါတယ်။ စင်ကာပူ ကွန်ပလိမ်:က တော်သေးတယ်တဲ.။
နီပေါမလေး sunam နဲ.rama မှာ asmitha ဆိုတယ်. စီနီယာတယောက် ရှိပါတယ်။ နီပေါ တက်ကသိုဟ်တုန်းကလည်: asmithaက စီနီယာ သူတို.က ဂျူနီယာ။ ကျောင်းပြီ:လို့ အလုပ်ဝင်တော.လည်: asmithaစီနီယာ အလုပ်ထွက်တဲ.နေရာ သူတို.က ဝင်လာတာပါ။ asmithaစီနီယာ နောက် ကုမ်မဏီပြောင်းပြန်တော. သူတို. ရောက်လာကြပြန်ရော။ asmithaစီနီယာက USက MUMကျောင်းကို အောက်တိုဘာ ရောက်လာပြန်တော. သူတို.က ဖေဖော်ဝါရီ မှာ လိုက်လာပြန်ရော။ asmithaက ပြောပါတယ်။ သူတို.တွေ ငါဘယ်သွားသွား လိုက်နေကြတာတဲ.။
မခိုင် ဟိုင်းကြီးကနေ ပုသိမ် ထ-၂ (အမှတ် ၂ အခြေခံပညာ အထက်တန်:ကျောင်း) ကျောင်းတက်ဖို. ရောက်လာပါတယ်။ မကြာပါဘူး မကြီးနဲ. မကေသွယ်(မခိုင်ညီမ) ၂ယောက် ပုသိမ်ကို ရောက်လာပြီ: ထ-၂ မှာ ကျောင်းတက်ကြပြန်တယ်။ မခိုင် YITတက်ဖို. ရန်ကုန်ရောက်လာပြီ: မကြာမှီ မကြီးနဲ. မကေသွယ် ရန်ကုန် ရောက်လာကြပြန်ရော။ သူတို.တွေ ပုသိမ်က ထွက်သွားချိန်မှာ စန်:ထွန်:က ပုသိမ်ကို ရောက်လာပြီ: ထ-၂ ကျောင်း တက်ပြန်ရော။ ပြီ:တော. ရန်ကုန်ကို လိုက်လာပြန်ရော။ မခိုင် စင်ကာပူ ရောက်ပြီ: မကြာမီ မကြီး စင်ကာပူ ရောက်လာပြန်ရော။ တန်:လန်:လေး စန်:ထွန်းလည်: စင်ကာပူကို မကြီ:ကောင်းမှုနဲ. ရောက်လာပြန်ရော။ မခိုင် အမေရိကား မထွက်ခင် နင်တို.တွေ ငါ့နောက် လိုက်နေကြတာ မကြာခင်မှာ နင်တို. အမေရိကားကို ရောက်လာဦးမယ်လို့ ပြောခဲ.ပါတယ်။ သူ နမိတ်ဖက်ခဲ.အတိုင်း မကြာမှီ စန်:ထွန်းတယောက် ယောင်တောင်တောင်နဲ. အမေရိကားကို လိုက်လာပြန်ရော။ ပြောပါတယ် မခိုင်နောက် လိုက်နေပုံများ။
ဘဝဆိုတာ ရထားတစီးလိုပါပဲ။ ကိုယ်နဲ. ရေစက်ရှိသူတွေက ဘူတာကနေ တက်လာလို့ ဆုံလိုက်ကြ၊ ရေစက်ကုန်လို့ ဘူတာရောက်ရင် ဆင်းသွားလို့ ခွဲခွါလိုက်ကြ။ ဒီသူငယ်ချင်းကို ချစ်လို့ အတူခရီးသွားမယ်လို့မှ မရတာ။ ကိုယ်ခရီးကိုယ်သွား သူ့ခရီးသူသွား။ ကြုံဆုံတုန်း စကားလက်ဆုံကြပြီ: အဆင်ပြေတာတွေးလည်: ရှိသလို တက်နင်းမိလို့ ယိုင်သွားလို့ ထိမိသွားရာကနေ ကတောက်ကဆလေးတွေလည်: ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရှိရင်လည်: တွေးလိုက်ပါ ရေစက်ရှိလို့ တွေ့ဆုံရခိုက် ခဏတာလေးပါ။ အချိန်တန်ရင် ခွဲခွါရမှာလို့။ တွေ့ဆုံရခိုက် ကိုယ်.ကို ချစ်တဲ. ကောင်းတဲ.သူလည်:ရှိသလို ကိုယ်.ကို မနှစ်သက် မကောင်းတဲ.သူလည်: ရှိမှာပါ။ လက်ခံလိုက်ပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ကောင်းစေတနာထားပြီ: နှုတ်ရဲ. ဆောင်မခြင်း၊ ကိုယ်ရဲ. ဆောင်မခြင်းနဲ. ကူညီစရာ ရှိတာ ကူညီလိုက်ပါ။ လောကကြီ:မှာ လူနှစ်ယောက် စတွေ့တာနဲ. အကဲခတ်မယ်။ ကိုယ်.ထက်နိမ့်ရင် သနားမယ်။ တန်:တူရင် ပြိုင်မယ်။ ကိုယ်.ထက် သာရင်တော. အားကျမယ်။ ဒါ သဘာဝပါပဲ။ရှေ့မှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်မှန်: မသိနိုင်ပေမယ်. ဘဝရထားကြီ:ကတော. ခုတ်မောင်းဆဲ။
မှတ်မှတ်ရရ လေးတန်:ကျောင်းသူ ဆယ်နှစ်သမီး အရွယ်မှာပေါ့။ ဟိုင်းကြီ:ရွာကို ဗိုဟ်ချုပ်မြင့်အောင်လာပြီ: ကမ်:နားတန်:က အိမ်တွေ ဖျက်ဆိုတာနဲ. ပျဉ်:ကတိုးတွေကို မရမ်:ကွင်း၊ ငပြေမဖက်က ဖေကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူဆောက်ထားတဲ. အိမ်အသစ်ကြီ:ခမျာ အပေါ်ထပ်ကြမ်:ပြင်တောင် မခင်းရသေးခင် ဖျက်လိုက်ရပါရောလား။ ပြီ:တော. ဟိုင်:ကြီ:ရွာနဲ. လမ်:လျှောက်ရင် မိနစ်လေးဆယ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဆယ်.ငါးမိနစ်လောက် စီးရတဲ. လယ်ကွင်းတွေကို သိမ်:ပြီ: ရွာသစ် တည်ပါရော။ ၁ လမ်:ကနေ ၁၀ လမ်:အထိ အပိုင်း က၊ ခ အဖြစ် နေရာကွက်သစ် ရိုက်လိုက်တယ်။ ဘာအပင်မှ မရှိ၊ ၅ လမ်:ကနေ စပြီ: ရေနောက်နောက်တွေ ထွက်တဲ. ရွာအသစ်ကို ဖျက်ဆိုတဲ. စကားတခွန်းနဲ. တည်ရတာ ပင်ပန်:လှပါတယ်။ ခြံပတ်ပတ်လည်မှာ သရက်ပင်၊ အရိပ်ရပင်တွေ စိုက်ပြီ: နေ့စဉ် ရေလောင်းရတာ အမော။ ရွာသစ်က ကလေးတွေအတွက် စာသင်ကျောင်းမရှိလို့ အနီးအနားက ဇီးဖြူချောင်းရွာမှာ သွာ:တက်ရတယ်။ လေးတန်:ကျောင်းသူ လေးယောက်၊ ကျောင်းသား သုံးယောက်၊တတိယတန်:၊ဒုတိယတန်:၊ပထမတန်:၊ သူငယ်တန်:တွေလည်:ပါတယ်။
ရွာခံကျောင်းသားတွေက တခြားရွာသားတွေလာတော. နေရာကျပ်တယ် ဆိုပြီ: အမြင်မကြည်ပါဘူး။ကိုယ်.ရွာသားမှ ကိုယ်.ရွာသား တခြားရွာသားဆိုတော. အနိုင်ကျင့်ချင် ပညာပြချင်တာပေါ့လေ။ ဒီလို ကတောက်ကဆလေးတွေ ရှိနေရာက တနေ့မှာတော. အတူတူ ထိုင်မယ် ဆိုတာကို နေရာမပေးလို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ. သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကို လက်ဆွဲပြီ: ကျောင်းပေါ်က ဆင်းချသွားလို့ ကျောင်းအုပ်ကြီ:ခမျာ လိုက်ခေါ်ပြီ: အတူတူ ထိုင်ဖို. နေရာစီစဉ်ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီထဲက ကျောင်းအုပ်ကြီ:က ဦးသာထွန်းသမီး အငယ်မကို မှတ်မိသွားတာ ခုထိ ဖေကို တွေ့တိုင်း တို.သတင်း မေးနေဆဲ။ ကျောင်းအုပ်လုပ်လာတဲ. သက်တမ်:တလျှောက် ဒီလိုမျိုး ကျောင်းပေါ်က ဆင်းသွားတဲ. ကလေး ဒီတယောက်ပဲ တွေ့ဖူးလို့ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်တယ် ထင်ပါရဲ.။ ဆရာတွေက ကျောင်းသား၂မျို:ကိုပဲ မှတ်မိတယ်။ စာတော်တဲ. ကျောင်းသားနဲ. ဆိုးတဲ. ကျောင်းသား။
မေဆီမှာ ပိုက်ဆံအမြဲ လာချီးတတ်တဲ. အဒေါ်ကြီ:တယောက် ရှိပါတယ်။ အရင်ကြွေ:လည်: မဆပ်သေးတဲ. အပြင် ထပ်လည်: လာချီးတယ်။ တနေ့တော. မေမရှိတုန်း အိမ်မှာ ဆော.နေတဲ. တို.ကို မေရှိလားလို့ မေးတယ်။ မေမရှိဘူး ဘာလဲ ပိုက်ဆံချီးမလို့လား၊ အရင်အကြွေးဆပ်ပြီ:မှ လာချီးလို့ ပြောလိုက်တာ အဆူခံရပါရောလား။ ကလေးက လူကြီ:စကားပြောလို့လေ။
စင်ကာပူမှာ အိမ်ပြောင်းဖို. အိမ်သူကြီ:လုပ်သူကို တလနိုးတစ်ပေးတော. အခန်:ဖော်ကို ပြောတဲ.။ အခန်:ဖော်ကို ပြောတော. ငါက အိမ်သူကြီ:က မဟုတ်တာ။ စာချုပ်ပြည်.ဖို. တလပဲ ကျန်တော. နောက်ထပ် လူရဖို.က မလွယ်တော. ဆက်နေပေးပါတဲ။ အမှန်က ပြောင်းချင်ရင် ၂ဖက်လုံးက လူရှာ၊ လူမရရင် ဆက်နေပေးဖို. ပြောရမှာ ။ ခုတော. အိမ်သူကြီ:က အခန်:ဖော်ကို ပြောတဲ.။ နောက်ဆုံ:လမှာ စပေါ်တင်ထားတဲ. ငွေနဲ. ချေပြီ: ပေ:စရာ မလိုတော.တာ ထုံးစံပါ။ ဒါပေမယ်. အဲဒီ အိမ်ရှင်က နောက်ဆုံ:လစာကို ပေးပြီ: အိမ်အပ်တော.မှ စပေါ်ငွေကို ပြန်ပေးမှာ မို့လို့ အိမ်လစာ ပေးရပါမည်တဲ.။ ပိုက်ဆံပေးဖို. အင်တင်တင် ဖြစ်နေတော. တနေ့တော. အိမ်လခ ပိုက်ဆံ တောင်းပါတယ်.။ တို.က အိမ်ကို စုငှါးထားတဲ.အထဲလည်: မပါ၊ ပြောင်းမယ် နိုးတစ်ပေးတော.လည်: ဘာမှပြန်မပြောလို့ အိမ်လခကို မပေးဘူး စပေါ်နဲ. နှိမ်တယ် ဆိုရော အိမ်လခ မပေးရင် အိမ်ပေါ်က ဆင်းတဲ.လေ။ ဘယ်မှာလဲ စပေါ်ငွေ၊ စပေါ်ငွေရရင် ချက်ချင်းပြောင်းပေးမှာ ဒီကလည်: ပြောင်းချင်နေတာလို့ ပြောလိုက်တော. အိမ်ပေါ်က ဆင်းဆိုတယ်. ပါးစပ်ပေါက် ပိတ်ရော။ စန်:ထွန်းလိုမျိုး ကြုံဖူးကြရဲ.လားဟင်။ စပေါ်ငွေ မပေးဘဲ အိမ်ပေါ်က ဆင်းတဲ.။
MUM ကျောင်း ဖုန်းအင်တာဗျူးတော. မြန်မာကျောင်းသူ ရှိတယ် သူဇာဝင်းတဲ.။ နောက်တော. ဒုတိယ မြန်မာကျောင်းသူ သဲသဲအေး အီ:မေ:လိပ်စာ ပေးတော. သဲသဲနဲ. အဆက်အသွယ်ရပြီ: သူဇာဝင်းက OS သင်တယ်. တီချယ်၊ အမတို.ကိုတောင် သင်ဖူးနိုင်တယ်တ.ဲ။ ရုံ:က တbatchတည်: တက်ခဲ.တဲ. ဇေဖြိုးကို သိလား မေးတော. ဖြူဖြူ သေးသေး တီချယ်လေဟာ ဆိုတဲ. အထိ မမှတ်မိသေးဘူး။ သူငယ်ချင်းတယောက်က "ဒေါင်းတင် မောင်းတင် OS အဝင်၊ ဒေါကြီ:မောကြီ: OS အပြီ:" ဆိုမှပဲ မှတ်မိတော.တယ်။ တီချယ် ဝင်လာရင် စာမျက်နှာ ဘယ်လောက်ကို လှန်၊ အိပ်ငိုက်ရင် စာမေး စာဖက်ခိုင်းလို့ တီချယ်စာသင်ချိန်ကို အိပ်မငိုက်ဘဲ နှိုးကြားနေရပါတယ်။
အန်တီမြက တီချယ် MUMကို ရောက်နေတယ် ပြောကတည်:က ထမင်းစားချိန်တွေမှာ တီချယ်ကိုများ တွေ့မလားလို့ ရှာမိပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ လှေကားရင်းမှာ တီချယ်ကို တွေ့တော. ဝမ်းသာအားရ ပြေးဖက်တာ မကြီ:ကို တွေ့ရဘိ အလား။ အမှန်က တီချယ်နဲ. ခုမှ စကား ပြောဖူးတာပါ။ ညနေကျတော. တီချယ် အဆောင်ကို လာပြီ: နားမလည်တဲ. စာကို ရှင်းပြပါတယ်။ တီချယ် ခဏနေတဲ. အိမ်ရှေ့မှာ ဂီတာ ထုတ်လာပြီး အမှတ်နည်းလို့ စိတ်ညစ်ပြီ: မှိုင်နေတဲ. တို.ကို ပျော်အောင် ဂီတာတီးပြီ: သီချင်းဆိုပြပါတယ်။ Just the way you are (Bruno Mars), Only one, ဖိုးချို ရဲ. ပိုင်စိုးမှု ဧကရီ၊ ဒီဥကာ ရဲ. ပျော်ရွှင်တဲ. ကမ်ဘာမြေ၊ ပိုင်စိုးမှု ဧကရီကို တီချယ်ကိုယ်တိုင် Englishလို ရေးထားတဲ. သီချင်းတွေ ဆိုပါတယ်။ အဖိုးကြီ:အို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ.ဦး နောက်နှစ်ခါ တန်ဆောင်းမုန်း ပွဲကြည်.ပါဦး ဆိုတော. ရယ်လိုက်ရတာ။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အော်ဟစ် သီချင်းဆိုရတော. စိတ်ထဲ နေသာထိုင်သာ ရှိသွားတယ်။ ဒီရောက်ပြီ: ၂လ အကြာမှ ဒီလို အားပါးတရ ရယ်တာ ပထမဆုံ:ပါ။ ထစ်ခနဲရှိ မျက်ရည်လွယ်တဲ. စန်:ထွန်း ဒီတခါ ကျတဲ. မျက်ရည်က စိတ်ချမ်:သာပြီ: ကျေနပ်လို့ ကျတဲ. မျက်ရည်ပါ။ တီချယ်က တပြည်.တွေနဲ. ရွယ်တူလို့ ထင်ရအောင် နုပျိုလှပ တက်ကြွဆဲပါ။
တီချယ်က ဂီတာတီး ကောင်းပါတယ်။ ရုံးက ပြန်ရောက်တာနဲ. အိတ်ချပြီ: ဂီတာတီးတော.တာတဲ.။ တယောက်တည်: နေရတဲ. အချိန်မှာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာကို လုပ်မှ အချိန်ကုန်မှန်: မသိ။ နို.မို့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်: မသိ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောသလို အခန်:သန်.ရှင်းရေးလုပ်ပြီ:ပြီ၊ ဗီရိုလည်: ရှင်းပြီ:ပြီ၊ အဝတ်လည်: လျှော်ပြီ:ပြီ၊ ဟင်းလည်: ချက်ပြီ:ပြီ၊ blog တွေ ဖတ်တာလည်: ကုန်ပြီ၊ ရုပ်ရှင်လည်: ကြည်.ရလွန်:လို့ ဇတ်တောင် နာနေပြီ၊ ကွန်ပျုတာဘေးအိပ် ကွန်ပျုတာဘေးစား ဘဝ ဖြစ်နေပြီ။ တို.ကိုပဲ ကြည်.ပါလား ဂီတာလည်: မတီးတတ်၊ ဟင်းချက်လည်: မချက်တက် စာပဲ ရေးတတ်တော. ဒီရောက်မှ ရေးလိုက်တဲ. စာတွေ။ မြှောက်ပေးတဲ. သူတွေကလည်: ရှိတော. ဖရဏပီတိ ဂွမ်:ဆီထိ ဟိဟိ။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ Arpon ဝတ်ပြီ: ချက်ပြုတ်နေတဲ. ယောက်ျားလေးဟာ ချစ်စရာကောင်းသလို မိန်:ခလေးတယောက် ဂီတာတီးပြီ: သီချင်းဆိုနေတာလည်: ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
တီချယ်အသိတွေနဲ. မိတ်ဆက်ပေးပြီ: တို.ကို တီချယ်ကိုယ်စား စောင့်ရှောက်ခိုင်းပါတယ်။ တီချယ်လိုပဲ စောင့်ရှောက်ပေးကြပါတယ်။ တယောက်တည်: မဟုတ်ဘူး အဖော်တွေရှိတယ် ဆိုတဲ. အသိက တော်တော် အားရှိစေပါတယ်။ စာရှင်းပြရုံမက ကျွေးမွေးပေးကမ်:တဲ. တီချယ်၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သွန်သင်ပြတဲ. တီချယ်၊ မဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဆိုပြီ: အမြဲတက်ကြွနေတဲ. ၊ အားငယ်ချိန်မှာ အားတက်စေတဲ.တီချယ်။ တီချယ်ကို မြင်ရတာနဲ. တီချယ်ရဲ. တက်ကြွလန်:ဆန်:မူတွေက ကူ:ဆက်လာပြီ: ကျနေတဲ. စိတ်ဓာတ်တွေ တက်လာပါတယ်။ နောင်ဘယ်အချိန်မှ ပြန်တွေ့ရမလဲ မသိပေမယ်. ဆုံတွေ့ရတယ်. ခဏတာလေး အတွင်းမှာပဲ တီချယ်ဆီက ရလိုက်တဲ. စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ. ရှေ့ဆက် ခရီးဆက်ရင်း ....
(ကြိုက်လွန်:လို့ Thwin Naung Soe's Facebook မှ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။)
တစ်ချို့လူတွေက ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက် လို သဘောထားကြတယ်။ ပုံလေးတွေတင်၊ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေရှာတင်၊ သီချင်းလေးတွေတင်၊ ဘယ်သူ like like, မ like like၊ ကိုယ် like တယ်။ ကိုယ်တင်ထားတာလေးပြန်ပြန်ကြည့်နေရတာ အမော။ ဘယ်သူမှ လာ မlike ရင်၊ ကိုယ်ဟာကို ပြန် like ထားတတ်သေးတာ။
တစ်ချို့ကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဧည့်ခန်းကရှိုးကေ့စ် လိုသဘောထားတယ်။ ရှိုးကေ့စ်ဆိုတာ ရှိတာလေးတွေ စီစီရီရီတင်ပြီးကြွားတဲ့နေရာမဟုတ်လား။ ဘွဲ့ယူ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ အိမ်ဝယ်၊ ကားဝယ်၊ ဂါဝန်အသစ်ဝယ်၊ ဘောင်ဘီဖင်ကျပ်ဝယ်၊ ဖိနပ်သစ်ဝယ်၊ ခရစ်ဒက်ကဒ်ရ၊ သိသိသာသာ တစ်မျိုး၊ မသိမသာတစ်ဖုံ၊ နည်းစုံတယ်နော..။ (ငါ့တော့ သောက်ညင်ကပ်နေကြလောက်ပြီ.. ဟိ..ဟိ..။)
တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အိမ်သာ လိုသဘောထားကြတယ်။ အိမ်သာကို လူတွေက ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ လိုနေချိန်ကြမှသာ အပြေးအလွှားလာကြတာလေ။ ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့ မနေအပ်တဲ့ အရပ်လိုလို ကျဉ်ချင်ကြတာကလား။ ခုလည်း အဲသလိုပါပဲ။ လူပျို၊ အပျိုဘဝမှာတော့ ရည်းစားရှာချင်တော့ နေ့ရော ညရော ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ဖေ့စ်ဘုတ်။ ရည်းစားလည်းရရော ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘူး။ အဲ… အိမ်ထောင်ပြုလို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ဖေ့စ်ဘုတ်ဖြစ်ပြန်ရော..။ မဟုတ်ရင် မင်္ဂလာဆောင်ပုံတွေ တစ်အိမ်တက်ဆင်းလိုက်ပြနေရမှာပေါ့..။ အဲ.. မင်္ဂလာဆောင်ပြီး သွေးအေးသွားပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခမျာ ချောင်ထိုးခံရပြန်ရော။ စောင့်ပေတော့ ကလေးရတဲ့အထိ။ အဲ.. ကလေးရပြီဆိုလို့ကတော့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ပြန်ရောက်လာကြပြန်ပါရောမဟုတ်လား..။ ဖေ့စ်ဘုတ်ဘဝ သင်္ခါရပေါ့လေ။
တစ်ချို့တွေအတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ယောက္ခမအိမ် လိုပဲဖြစ်နေပြန်တယ်။ ယောက္ခမများ မတော်မဖြစ်လို့တော်ရပေမယ့် တော်ယုံတော့ ပတ်ပတ်သက်သက်မလုပ်ကြတဲ့သဘောမဟုတ်လား။ အဲလိုပဲပေါ့။ အကောင့်တော့ သူများဖွင့် ကိုယ်ဖွင့် ဖွင့်ကြပြီး၊ တစ်လနေလို့လည်း တစ်ခါအလည်မလာ၊ လာပြန်တော့လည်း ဖင်ပူအောင်မနေကြတဲ့သူတွေပေါ့။ သူတို့အတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်က ယောက္ခမအိမ် လေ။
အဲ… တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဘော့စ်(Boss) လိုသဘောထားကြပြန်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ ဘယ်သွားတယ်၊ ဘာစားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်၊ ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုပြီး မပြတ်တမ်း Report လုပ်ကြတယ်။ တစ်ချို့အတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ဆရာဝန်ကြီး ကျလို့။ ဒီနေ့ အီးမပါဖြစ်ဘူး၊ ရှူရှူးတွေဝါတယ်၊ ခေါင်းတွေကိုက်တယ်၊ လည်ချောင်းထဲကပူတယ်၊ ဖင်ခေါင်းထဲကအေးတယ် နဲ့ လာလာပြောကြပြန်ရော။ တစ်ချို့လည်း တီးတိုးဖေါ် အဖြစ်မြင်ပြီး၊ ဒီနေ့ Moody ဖြစ်တယ်၊ ဒင်းတော့လား အစိမ်းလိုက်ကိုဝါးစားချင်တယ်၊ ဒီဘဝ သေတာအေးပါတယ်၊ ပျော်လွန်းလို့ဂျွမ်းတောင်ထိုးနေရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ လာလာပြောကြပြန်ပါရောလား။
တစ်ချို့တွေများကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အမှိုက်ပုံကြီး လို ဖွထားတတ်ကြပြန်ရော။ ဘာမှန်းခွဲမရတဲ့ပုံတွေတင်၊ ဝါးတားတားပုံလည်းတင်၊ ခွေးပုံတင်၊ ကြောင်ပုံတင်၊ အရက်ပုလင်းပုံတင်၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလည်းဆိုတာ မှန်းမရလောက်အောင်၊ တစ်ပြုံတစ်မကြီး အုပ်သင်းဖွဲ့တဲ့ပုံတွေချည်းရွေးတင်၊ ဝင်ကြည့်မိပလားဆို မူးနောက်နေအောင်ကို လုပ်ထားတတ်ကြတာကလား။
တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို Chat Room လုပ်ဖို့သုံးကြပြန်တယ်။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံအောက်မှာ ကွန်မင့်ပေးရင်းနဲ့ စကားလက်ဆုံတွေကျနေတတ်ကြတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပေါ့။ ဟေ့ကောင်ကြီး မတွေ့တာကြာပေါ့ တို့။ ဟိုကောင်တွေနဲ့ရောတွေ့သေးလား တို့။ မင်းကတော့အရင်အတိုင်းပဲဟ၊ ခုဘယ်နိုင်ငံရောက်နေတုန်း တို့..၊ အဲဒီကနေစလိုက်ကြတာ ကွန်မင့်တွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ရော..။ ဓါတ်ပုံရှင်ခမျာ ကွန်မင့်များလို့ မပျော်နိုင်ပါဘူး၊ မင့်ထားတာတွေက ပုံနဲ့မဆိုင်ဘဲကိုး။ သူတို့ဖာသာ စကားလက်ဆုံလာကျနေကြတာမှုတ်လား။
ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ကာစီနိုတစ်ခု လို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခု လို သဘောထားတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလေရဲ့။ တက်တက်ပြီး ဂိမ်းကစားကြတာကလွဲလို့ ဘာဆို ဘာမှ မလုပ်ကြဘူးတဲ့လေ။ အဲလိုကျတော့ အက်ပြီးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သောက်ရူးလား လို့ မေးရတော့မယ်။ (ဟိ..ဟိ.. ဒါက ရန်တိုက်ပေးတာ)။
ဆင်းရဲသား ဖေ့စ်ဘုတ်တန်းစား ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ ဆင်းရဲတော့ အကောင့် တစ်ခုကို လင်နှင့်မယား မျှပြီးသုံးကြရရှာတယ်လေ။ တစ်ယောက်တစ်ခုမရှိနိုင်ကြရှာတော့ ဒီလိုပဲ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပေါ့..။
တစ်ချို့ကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်သူရင်းငှားချ တာလည်းရှိတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်လယ်မလုပ်ဘူး၊ သူရင်းငှားကို သီးစားပေးပြီး လယ်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်အကောင့်ကို ကိုယ်ကမဝင်ဖြစ်ဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ယောက်က ဝင်ဝင်ပြီး activities တွေလုပ် လုပ်ပေးရတာမျိုးပေါ့..။ အများအားဖြင့်တော့ ကောင်လေးတွေက ပိုင်ရှင်၊ ကောင်မလေးတွေက သူရင်းငှားလုပ်တတ်ကြတာပေါ့..။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်များနေကြတဲ့ လူမှုနယ်ပယ်ထဲက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Keep in touch ဖြစ်နေဖို့တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က အများကြီး စွမ်းဆောင်ပေးနေတာအမှန်ပါပဲ။
သဟာဖြင့် သြဘာတို့ သူများတွေလုပ်သမျှကို ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောနေသလားလို့ မေးကြတော့မယ်။ ကျုပ်မှာလည်း ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ပါနော်။ ကျုပ်အတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ပြတိုက်တစ်ခု။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တာမျိုး ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက်တော့ဟုတ်ဘူးဗျ။ အများကြည့်စေချင်လို့ လုပ်ထားတဲ့ပြတိုက်။ ပြတိုက်လေးလူစည်အောင်၊ နုတ်စ်တွေရေးရ၊ ပုံတွေ အော်ဂနိုက်ဇ်ဖြစ်အောင်တင်ရ၊ လူပျိုကြီးပြတိုက်မို့ လူအထင်မသေးအောင် ပြုပြင်နေရတာအမော။ ခုတော့ ဘုရားပေါ်က အလကားဝင်ရတဲ့ ဂေါပကပြတိုက်လောက်တော့ လူစည်ပါတယ်။
ဒါပေသည့် တစ်နေ့တစ်နေ့ ကျုပ်ပြတိုက် လူဘယ်လောက်လာလည်းရေတွက်ရတာ လောဘ။ ဘယ်သူတွေများ ဘယ်လိုမင့်သွားကြလည်း စောင့်ဖတ်ရတာလည်း မောဟ။ မတော်တရော် လာမင့်သွားလို့ မသိမသာ ပြန်တွယ်ရတာက ဒေါသ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့တွေးမိသား၊ နိမ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေးများ မျက်စပြစ်စတင်မယ်ကြံရင် ပထမဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ပါလားလို့….။ သွပ်..သွပ်...သွပ်...
ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၁.
သင်္ကြန်..သင်္ကြန်.. မြန်မာတို.ရဲ. သင်္ကြန်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်ကတော. ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတာနဲ . အိမ်အနီးက ဘော်ဘော်တွေနဲ. ဟိုင်းကြီ:တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ရွာရိုးကိုးပေါက် လျှောက်ပြီ: တနေကုန် ရေလိုက်လောင်းတယ်။ ခွက်စုတ်လေးနဲ. ပက်တာလောက်တော. ရယ်တာပေါ့လို့ စတဲ.သူတွေကို ပိုပက်တယ်။ တရွာလုံးပတ်ပြီ: မန်:ဒတ်တိုင်းက ကျွေးသမျှကို လိုက်စားတယ်။ အမြင်ကတ်တဲ.သူတွေကို အညှိုးနဲ. အတိုးချပြီ: အိုးမဲလိုက်သုတ်တယ်။ နှစ်ဆန်:တရက်နေ့မှာ ဘုရားတောင်သွားပြီ: ကန်တော.တယ်။ ပြီ:ရင် သောင်ပေါ် လမ်:လျှောက်မယ်။ သင်္ကြန်မှာရတဲ. အိမ်:ဂျီအသစ်နဲ. ရှိုးထုတ်တယ်။ နှစ်ဆန်:တရက်နေ့မှာ နာတဲ. ပရိတ်တရားပွဲမှာတိုက်တဲ. အချိုရည်ကို နင်းကန်သောက်။ ပုသိမ်သင်္ကြန်တော. နွှဲခွင့် မကြုံလိုက်ရပါ။
၁၉၉၉ မှာတော. ရန်ကုန်သင်္ကြန် ၃ရက်လုံး လည်ဖူ:တယ်။ တကားလုံးက သူငယ်ချင်း ခိုင်မေ့ မောင်ဝမ်:ကွဲတွေနဲ. သူအမျိုးတွေ။ အတော်ပျော်ဖို. ကောင်းပါတယ် ။ ရှူ:ရှူ:ပေါက်ချင်ရင် ရေပက်ချိန်ထိ စောင့်ပြီ:ပေါက်ချလို့ အနံ.ရတယ်လို့ အချင်းချင်း စကြ ။ ချမ်:လို့ ဘီယာသောက်ကြပေမယ်. မောင်မောင်ကတော. အမရှေ့မှာမို့လို့ မသောက်ဘူးနဲ. တူပါရဲ.။ သူများတွေ ခုန်ပေါက်ကနေမယ်. ရှက်ပြီ:မကတဲ. မောင်မောင် ပြန်ခါနီးကြမှ ဒိုးဒိုးဒန်.ဒန်. ကတာကို ခိုင်မေ့မောင်လေးက လက်တို.ပြီ: လှမ်:ပြလို့ သူငယ်ချင်း၂ယောက်မှာ ရယ်လိုက်ကြတာ။ သူရှက်သွားမှာစိုးရသေး။ အလည်ကောင်းတာ မျက်နှာတွေ စုတ်ပြတ်သက် မဲသည်:သွားတာ တော်တော်နဲ. ပြန်မကောင်းတော.ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း အိမွန်(အီးစုတ်)၊နွယ်ဝင်တို.နဲ.အတူ ရန်ကင်းက အီးစုတ်ရဲ.မန်:ဒတ်မှာ ရေပက်ဖူးတယ်။ ဒါလည်: မဲသည်:သွားတာပါပဲ။ သင်္ကြန်ပြီ:လို့ ကျောင်းပြန်တက်တော. သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့တော. ရီလိုက်ကြတာ။ နှာခေါင်းလေးပဲ ကွက်မဲနေပြီ: ဂျိုကာနဲ.တူလို့လေ။ ကွန်ပျူတက်ကသိုလ်မှာတော. သင်္ကြန်ကျောင်းပိတ်ရက် မတိုင်ခင် နောက်ဆုံ:ရက်မှာ သင်္ကြန်အကြို ရေလိုက်လောင်းကြတယ်။
နံ့သာသွေးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြီ: အပျိုလူပျိုတွေ နံ့သာရည်နဲ. ဘုရားရေသပ်ပယ်တာဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ. ချစ်စရာကောင်းတဲ. ဓလေ့ပါ။ မိန်:ကလေးနဲ. ယောက်က်ျားလေး လောင်းလှေတဖက်စီမှာ ရပ်ပြီ: လောင်းချင်တဲ. မိန်:ကလေးကို ခွင့်တောင်းပြီ: ရေလောင်းရတယ်. ရခိုင်သင်္ကြန်က ချစ်စရာကောင်းသလို ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပေမယ်. ရခိုင်စကားမပြောတတ်၊ ရခိုင်သင်္ကြန်တခါမှ မနွှဲဘူးတဲ. သူပါ။ ရခိုင်သင်္ကြန် ပျော်စရာ ကောင်းမကောင်း နွှဲဖူးတဲ. သူတွေကို မေးကြည့်လိုက်ပါနော် ။ :) မွန်လူမျိုးတွေရဲ. သင်္ကြန်ချိန်မှာ စားကြတဲ. သင်္ကြန်ထမင်းက နာမည်ကြီ:ပါတယ်။
ဟိုင်းကြီးမှာ ဆိုင်ကယ် စီးတတ်ခါစ ဆိုင်ကယ်နဲ. အလည်ကောင်းတာ ဇီးဖြူချောင်းရွာ အဝင် သဲတောထဲမှာ နစ်ပြီ: စက်မနှိုးတော.လို့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ဆိုင်ကယ်သမားတွေကို အကူအညီတောင်းပြီ: နှိုးမှပဲ နှိုးတော်မူတော.တယ်။ နောက်ပိုင်း အသက်ကြီ:လာလို့ပဲလားမသိ ရေပက်ခံလည်: မထွက်ချင်၊ မန်:ဒပ်ထိုင်ပြီ: ရေလည်:မပက်ချင်လို့ သင်္ကြန်တွင်းဆို စာအုပ်တွေ အများကြီ: ငှါးပြီ: အိမ်တွင်းအောင်းပြီ: စာဖတ်တော.တယ်။ စိတ်ကူးပေါက်ရင်တော. မေတို.နဲ. အတူ ဘုန်းကြီ:ကျောင်းလိုက်ပြီ: ဥပုပ်ယူတယ်။ သင်္ကြန်ကလည်: ငယ်ငယ်တုန်းကလို ပျော်စရာ မကောင်းတော.ဘဲ မူးရူးနေတဲ.သူတွေများလို့ အပြင်ထွက်ဖို.ကို ကြောက်မိပါတယ်။ သင်္ကြန်ဆိုတာကလည်: အမူးပွဲတော် ကျင်းပဘိအလား ။ တနှစ်မှတခါဆိုတော. ကဲကြပေမပေါ့ ။
၂၀၀၇ သင်္ကြန်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် သီလရှင်ဝတ်ပြီ: ပထမဆုံးအကြိမ် တရားစခန်:ဝင်ပါတယ်။ မှော်ဘီ ဝါ:နက်ချောင်း ဗောဒိရိပ်ငြိမ်တောရမှာပါ။ ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုလို့ ကြုံရင်ကြုံသလို ဗောဒိရိပ်ငြိမ်ရောက်ပြီ: ဘုန်းကြီ:ကျောင်းဆိုတာ ကိုယ်နဲ.မဆိုင် လူကြီ:တွေသာ သွားတဲ.နေရာလို့ မမြင်တော.ပါ။ ကြုံမှ တရားစခန်:က အတွေးအကြုံတွေကို ရေးဦးမယ်။
စင်ကာပူ သင်္ကြန်တုန်းကလည်: အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်လို့ သင်္ကြန်ကို မနွှဲလိုက်ရပေမယ်. စင်ကာပူကပိတောက်တွေ မြင်တော. သင်္ကြန်ရနံ.ကို ခံစားမိတယ်။ Pennisula Plazaမှာ ဆိုင်တွေက လှူတဲ. မုန့်ကို မကြီ:နဲ. သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ တန်:စီပြီ: ယူ၊ ဝိုင်းဖွဲ.စားတာ သိပ်ပျော်စရာကောင်းဆိုပဲ။
တနှစ်မှ တခါ သင်္ကြန်ချိန်မှာသာ ပွင့်တဲ. သစ်စာရှိတဲ.တော်ဝင်ပိတောက်ဟာ သင်္ကြန်ရဲ. အမှတ်သင်ကေတပါ။ ပိတောက်ပန်: မပွင့်ရင် သင်္ကြန်က မပြည်.စုံဘိအလား။ ခေတ်တွေဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း သင်္ကြန်ချိန်မှာ အတာအိုးကို အိမ်ရှေ့မှာ ထားပြီ: နှစ်သစ်ကို ကြိုဆို၊ မုန်.လုံးရေပေါ်လုပ်ပြီ: အိမ်နီးနာ:ချင်းတွေ ဝေ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ တရော်ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကို ဝေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီ: ဥပုပ်စောင့်ကြ၊ သက်ကြီ:တွေကို ခေါင်းလျှော်၊ လက်သည်:ညှပ် ပေး၊ နှစ်ဆန်:တရက်နေ့မှာ အန်တရယ်ကင်း ပရိတ်နာပြီ: ကုသိုလ်ကောင်းမှူတွေ လုပ်ပြီ: နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြတဲ. ချစ်စရာကောင်:တဲ. ဓလေ့ကတော. ရှိနေဆဲပါ။ အပူဆုံးရာသီမှာ အေးချမ်:ပါစေ၊ နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေ နှစ်သစ်ကို မပါစေချင်တဲ. စိတ်စေတနာနဲ. လောင်းကြတဲ. သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော်က အဓိက်ပယ် ရှိလှပါတယ်။
ပျော်စရာကောင်းလှတဲ. သင်္ကြန်ကို ရေလောင်:မယ်.သူမရှိ၊ ပိတောက်မရှိဘဲ ဖြတ်သန်:ရတဲ.တို.ကို သူငယ်ချင်း ကောင်းကောင်:က misquote လုပ်ပြီ: စပါတယ်။ "သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင် အမေရိကားရောက်လို့ မှိုင်" တဲ.။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေလောင်းခွင့် မကြုံပေမယ်. ဘလော့ကနေပဲ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ရေလောင်းလိုက်တယ် နော် ဘွမ်:... ဘွမ်:... ဘွမ်:... ။
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လမ်:ချမ်:မြေ့ကြပါစေ ။
US မှာတော. ပစ်စည်းဝယ်ပြီ: မကြိုက်ရင် ၃လအတွင်း ပြန်လဲလို့ ရတယ် Receiptကိုသာ သိမ်:ထားဆိုတဲ. စီနီယာတွေရဲ. စကားကို နားထောင်လိုက်တာ အတော်ဟန်ကျလိုက်ပါတယ်။ Rice Cooker ဝယ်ပြီ: ထမင်းခိုးချက်မလို့ လုပ်လိုက်တာ ညှော်နံ.ရလို့ ပလပ်စ်ပေါက်ဖြုတ် ပြတင်းပေါက်ဖွင့် ပန်ကာဖွင့်ပြီ: သူငယ်ချင်းတွေဆီ အမြန်ပြေးရပါတယ်။ တကယ်လို့ မီးခိုးထွက်လာရင် မီးသတ်Alarmက မြည်ပြီ: အခန်းတွင်းမှာ ခိုးချက်လို့ ဒဏ်ကြေးက ၅၀ ဆောင်ရမယ်။ ဈေးပေါတဲ. ပစ်စည်းဝယ်တဲ. အကျိုးတွေလေ။ Receiptပြ နည်:နည်:ဈေးကြီ:တာကို အလိုက်ပေးပြီ: ဝယ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဘာမှ မေးမနေပါဘူး။
အမေရိကန်တွေဟာ ခန်နာကိုယ် အနံ့ကို တော်တော် sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ ရွေးချယ်ရမယ်. သူက ၂ယောက် ဖြစ်နေရင် လက်မြှောက်ခိုင်းပြီ: အနံ့အသက်ကောင်းတဲ.သူကိုပဲ ရွေးချယ်ပါသတဲ.။ စီနီယာ ဗီယက်နမ်မ ကိုရီးယားရောက်တော. အတော်အံ.ဩပါသတဲ.။ ဘာလို့ ကိုရီးယားမတွေ တရုပ်တည်: တပုံစံတည်: ဖြစ်နေပါလိမ့်ပေါ့။ ကိုရီးယားမှာ အင်တာဗျူးဝင်တော.မယ် ဆိုရင် လှအောင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြပါသတဲ.။ နောက်ဆို အလုပ်ကြော်ညာမှာ ရုပ်မချောသူများ အနံ့အသက်မကောင်းသူများ မလျှောက်ရလို့ ရေးလိုက်ပါတော.လား။
USမှာ ရေပိုက်ခေါင်း၂ ခု စီ ရှိပါတယ်။ ယောင်ပြီ: ညာဖက် ရေပိုက်ခေါင်းကို သွားမလှည်.လေနဲ.။ အားကနဲ အော်သွားစေရမယ်။ ရေခဲတမျှ အေးစက်တဲ. ရေတွေလေ။ ဘယ်ဖက်ကတော. ရေပူပါ။
စင်ကာပူမှာတော. အများသုံး အိမ်သာတံခါးတွေမှာ အနီရောင်၊ အစိမ်:ရောင်တွေနဲ. အထဲမှာ လူရှိ မရှိ သိနိုင်ပါတယ်။ US မှာတော. ဒူ:ဝက်လောက်ထိ မြင်ရပါတယ်။ ဖိနပ်လေးတွေ မြင်ရမယ်ဆို အထဲမှာ လူရှိနေတယ်။
စင်ကာပူမှာတော. နှာချေရင် "Excuse me." "I am sorry." ပြောတတ်ကြပေမယ်. US မှာတော. ဘေးက ကြားတယ်. တယောက်က "Bless you !" လို့ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ. အလေ့အကျင့်လေးပါပဲ။
မုန်တိုင်းပြီးသွားပေမယ်. ဒုက္ခတွေက မပြီ:သေးပါဘူး။ ကိုယ်အိမ် အနီးအနားက တွေ့တဲ. ပစ္စည်းတွေ ကောက်။ သူများအိမ်မှာ ကိုယ့်ကစ္စည်း တွေ့ရင် ပြန်တောင်းယူ။ စားစရာ မရှိလို့ လာတောင်းရင် ရှိတဲ. အထဲက မျှဝေ။ ဝတ်စရာ မရှိလို့ လာတောင်:ရင်လည်: ရှိတဲ. အထဲက မျှဝေပေး။ အိမ်က အလုပ်သမားတယောက် ဝတ်ထားတဲ. အင်္ကျီကို တွေ့ လို့ ဘယ်ကရတာလည်: မေးတော. တံတားနားက ရွှံ့ပုံအောက်မှာ တွေ့လို့ လျှော်ဖွတ်ပြီ: ဝတ်နေတာတဲ.။ မကြီး ကန်တော.ထားတဲ. အင်္ကျီမို့ ဖေ့ခမျာ တခြားအင်္ကျီနဲ. လဲရှာတယ်။ ယောက်ျားတွေကလည်: တဒုန်းဒုန်းနဲ. ပျက်စီးသွားတာတွေကို ပြင်နေရသလို မိန်:မတွေကလည်: တဒိုင်းဒိုင်းနဲ. လျှော်ဖွတ်နေရပါတယ်။ ပင်လယ်ရေငန် ထိသွားတာမို့လို့ မလျှော်ရင် ဆွေးမှာလေ။ အသစ်လည်: ဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ထမင်းစားပြီ:တာနဲ. တရွာလုံးက မိန်:မတွေ ရေတွင်းဆီ ချီတက်ပြီ: အဝတ်လျှော်ပြိုင်ပွဲကြီ: ကျင်းပနေဘိအလား။ တကျွန်:လုံး မြုပ်တာဆိုတော. အကုန်လုံး ရေငန်ထိတာပါပဲ။ လက်တွေပေါက်တဲ. အထိ လျှော်ဖွတ်ရလို့ မုန်တိုင်းကြောင့် မသေဘဲ ပင်ပန်:လို့ သေမယ်လို့ ငြီးယူရတဲ. အထိပါပဲ။ အိမ်နား ရွှံ့ပုံအောက်ကတွေ့တဲ. ပုဆိုးကို သေသေချာချာ လျှော်ဖွတ်ပြီ: တယောက်ယောက်ကို ပေးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတာ။ ပေးတဲ.ဆီတောင် မရောက်လိုက်ဘူး ဗျိဗျိနဲ. ပြဲသွားလို့ လက်နှီးစုတ် လုပ်လိုက်ရပါရောလား။ ရေကို သေသေချာချာ ကြိုချက်ပြီ:မှ သောက်ရတယ်။ မုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲ ဝမ်:ရောဂါ ဖြစ်မှာ စိုးလို့လေ။
မုန်တိုင်းတိုက်ပြီ : နောက်နေ့မှာပဲ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ. ရောက်လာပါတယ်။ ရေတွင်းတွေကို ဆေးခတ်၊ ဒဏ်ရာရတဲ. သူတွေကို စာသင်ကျောင်းမှာ ကုပေးပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူတွေက ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ ရန်ကုန်က ဆင်းလာသူက လက်နဲ. ချက်နား တဝိုက်မှာ မီးလောင်နာလို အနာတွေ ပေါက်လာလို့ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်ဆီ ပြေးပြရပါတယ်။ ဟိုင်းကြီ:တိုက်နယ်ဆေးရုံကလည်: ပြိုကျပျက်စီးနေလို့ ပြင်ဖို. အချိန်ယူရဦးမယ်။ ပုံမှန်ချိန်ဆို ရွာက ဆရာဝန်တွေကို ထမင်းကျွေးမှာပါ။ ခုလိုချိန်မှာတော . နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်တွေလည်: ကိုယ်ရိက္ခာနဲ. ကိုယ် လာကုပေးရရှာတာ။ ရယ်ဒီမိတ် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်လေး ပြုတ်စားနေတယ်. ဆရာဝန်တွေကို မြင်တော. ဪ တကယ် အလုပ်လုပ်သူတွေပါလား။ သတင်းတွေ နားထောင်ပြီ: ဒဏ်ရာရသူများတဲ. နေရာတွေဆီ သွားကြပြန်တယ်။ မွန်မြတ်တဲ. လုပ်ရပ်မို့ သာဓုခေါ်မိပါတယ်။
ပြင်ခရိုင်ကျွန်း ဘုန်းတော်ပြည်. ရွာမှာတော. ဘုန်းကြီ:ကျောင်းပြိုလို့ မုန်တိုင်းလာခိုတယ်. လူ၂၀၀ကျော်လောက် သေတယ်လို့ ကြားတယ်။ ပြင်စလူမှာတော. အားလုံးသေတယ်လို့ ကြားတယ်။ ကမ်:နားမှာ နေကြသူတွေရဲ. အိမ်တွေက ခနော်ခနဲ. လေတချက်တိုက်ရင်တောင် ပြိုမယ်.အိမ်တွေ ဆိုတော. ဒီမုန်တိုင်းဒဏ် ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။ ပင်လယ်ဖက် ကပ္ပလီမှာ နေတဲ.သူတွေကတော. လှိုင်းလုံးကြီ:တွေက အိမ်တွေကို တိုက်ချသွားလို့ ကုန်းတွင်းကို အသက်လုပြီ: ပြေးရတာ အဝတ်အစား ဘယ်အချိန် ကျွတ်သွားမှန်းတောင် မသိဘူးတဲ.။ ဒါပေမယ်.လည်: အရှက်ထက် အသက်ထက် အရေးကြီးလို့ လွတ်အောင်ပဲ ပြေးခဲ.ရတယ်။ ဟိုင်းကြီ:မှာ မုန်တိုင်းတိုက်ချိန်က နေ.ဖက်မှာ တိုက်တာ။ ဒါပေမယ်.လည်: ညအလား မှောင်မဲနေတာပဲတ.ဲ။ ညဖက်ဆိုရင် ဟိုင်းကြီ:မှာလည်: အသေအပျောက် များနိုင်တယ်။ မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ. ကမ်:ဖက်ဆိုပြီ: စွတ်ပြေးနေတာ ပင်လယ်ဖက် ဖြစ်နေမှ ဒုက္ခ။
ဘိုကလေး၊လပွတ္တာဖက်မှာ ညဖက်မို့ အသေအပျောက် များတာပါ။ မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ. ဘယ်ပြေးလို့ ပြေးရမယ်မှန်:မသိ။ ပြေးလွှားရင်း သစ်တုံးတွေ့လို့ ဖက်ထားတာ ရေကျသွားတော.မှ သိတယ် အုန်းပင်ထက် ရောက်နေမှန်:။ ဒီဖက်ကမ်: သင်္ဘောပေါင်းမိုးကနေ ဝှီးကနဲ လေနဲ.ပါသွားတာ ဟိုဖက်ကမ်:ကို ရောက်သွားပုံများ အာလာဒင်ကော်ဇောပျံ စီးသွားဘိအလား။ ငိုအားထက် ရယ်အားထက် အဖြစ်တွေပါ။
စို:လင်းကျော် သင်္ဘောကြီ: ကမ်:ပေါ်တင်သွားလို့ မြေကြီ:တွေ တူးပြီ:ဆွဲချတာ သိန်:၂၀ ၃၀ ကုန်သွားပါရောလား။ တချို. အိမ်ရှေ့မှာ ချည်ထားတယ်. သင်္ဘောတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်:မသိဘဲ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားတာတွေ၊ ကမ်:ပေါ် ဟိုးအဝေးကြီ: ထိုးတင်သွားလို့ မြေကြီ:တူးပြီ: ဆွဲချဖို. ပိုက်ဆံမတက်လို့ အဆုံ:ခံလိုက်ရတယ်. သင်္ဘောတွေ။ အိမ်မှာ ရှိတယ်. သင်္ဘော၂စီးက တော. အဝေးကို ထွက်မသွားဘဲ အိမ်နားမှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ဖေ့ရဲ. ပထမဆုံ: သင်္ဘောအကောင်လေးဆို အိမ်ရှေ့မှာ ကပ်ခံနေတာ။ မေက သင်္ဘော ဦးတိုင်ကို လက်ကလေးနဲ. ပွတ်ပြီ: ပြောရှာတယ် အကောင်လေးခမျာ တို.ကို လုပ်ကျွေးမလို့ အိမ်နားမှာပဲ ကပ်နေရှာသတဲ.။ ပစ္စည်း အကောက်ကောင်းကြတာ ပိုက်သူကြီ: မဟုတ်ဘဲ ပိုက်တွေပိုင်တဲ. အဖြစ် ။
နိုင်ငံတကာက ကူညီဖို. ကမ်:လှမ်:ပေမယ်. လုံခြုံရေးအရဆိုပြီ: နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ.တွေကို အဝင်မခံတာ နိုင်ငံတကာက ဝိုင်းဝန်:ရှုံ.ချ။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဘန်:ကီးမွန်:ကိုယ်တိုင် ဖျောင်းဖျတော.မှ အဝင်ခံတော.တယ်။ မေ ၇ ၈ ရှိနေပါပြီ ။ ဒီအတောအတွင်း ငတ်လို့ ဆေးမကုသလိုက်လို့ ဘယ်လောက်များ သေသွားပြီလဲ။ အမေရိကန်လို နိုင်ငံကြီ:က ဒီလောက် ဒုက္ခရာက်နေတာကို အခွင့်အရေးယူပြီ: ဘယ်ဝင်တိုက်ပါ့မလဲ။ မဟုတ်တာတွေ တွေးပူပါဘိ ချိုကုပ်ဒူးကြီ:ရယ်။ ကိုယ်လည်: မလှူနိုင် သူများအလှူကိုလည်: ပိတ်ပင်။ အင်း ခက်တယ်။ နာဂစ်တိုက်ပြီ: ရက်ပိုင်းမှာပဲ တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်မှာ ငလျင်လှုပ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင် ဆင်းလာပြီ: ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ ချက်ချင်းတောင်းခံတယ်။ ကွာပါ့နော် တို.များ ခေါင်းရှောင်နဲ.။
ဖျာပုံမှာ မုန်တိုင်းခိုနေတယ်. သင်္ဘောတွေ ပြန်ဆင်းလာကြပြီ။ ဦးရှင်ကြီးအပိုင် မိန်:မလှကျွန်းတဝိုက်မှာ အလောင်းတွေ စီနေတာများ သင်္ဘောမောင်းလို့ မရလို့ ဝါးလုံးနဲ. ထိုး လမ်:ဖယ်ပြီး မောင်းခဲ. ရသတဲ.။ စိတ်ကြမ်:လူကြမ်: ပင်လယ်သမားတွေခမျာ ရေလည်: မသောက်နိုင် ထမင်:တောင် မြိုမကျ ဖြစ်ရပါသတဲ.။ စိတ်နှလုံး မသာယာလို့လေ။ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်ရင်တောင် ဘယ်လို ခံရတာ၊ ဘယ်လို လွတ်အောင် ပြေးရတာလို့ ပြောပြီ: နှုတ်ဆက်ကြတာ။
စိုးလင်းကျော်သင်္ဘောကြီ:လည်: ချောဆွဲခံရပြီ: ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ပို့နေရပါတယ်။ တနေ့ တနေ့ လာလိုက်တဲ. ကယ်ဆယ်ရေး သင်္ဘော။ ဟိုင်းကြီ:ကို ကပ်တာနဲ. ကုန်ချ ကမ်:နားက အိမ်တွေမှာ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ပုံထား။ပြီ:ရင် ကားတွေနဲ. ရေတပ်ဌာနချုပ်ကို သယ်။ ပြီ:မှ ရပ်ကွက်အလိုက် ခွဲတမ်:ချပေးတာ။ ရေတပ်တတပ်လုံး သွပ်တပြောင်ပြောင် ဖြစ်နေပေမယ်. တို.တော. သွပ်တချပ်မှ မရသေးပါ။ အမိုးမရှိတယ်.အထဲ မိုးရွာလို့ ပေးလာမယ်. အကူအညီကို မစောင့်နိုင်ဘဲ မေကိုယ်တိုင် မရမ်:ကွင်းဖက်ကို ဆင်းပြီ: ဓနိလိုက်ဝယ်ပြီ: အားခြင်းမိုးလိုက်ရတယ်။ နေ့စဉ် ခွဲတမ်:ကလည်: တနေ့နဲ. တနေ့ မတူပါဘူး။ တခါတလေ ဆန်တပြည်၊ တခါတလေ ဆီအစိတ်သား၊ ထန်:ညက်ခဲတထုပ်၊ စောင်တထည် ဆိုတာမျိုး။ အလုပ်သမား ၃၀ ၄၀ ကနေ ၈၀ လောက်အထိ ရှိနေတတ်တယ်. တို.အိမ်အတွက်ကတော. ဆင်.ပါးစပ် နှမ်:ပက်သလိုပါပဲ။ ဒီအထဲ ရက်ကွက်ဥက္ကဌက ဆွေမျိုးချစ်တာ မကျေနပ်လို့ ရက်ကွက်ဥက္ကဌပြောင်းကြ။ ပိုတယ်. ပစ္စည်းကို ဆိုင်ပြန်သွင်း။ ယိုးဒယားတံဆိပ်ပါတယ်. ဆားထုပ်တွေ ဆိုင်ပေါ် ရောက်နေတာ တွေ.ရပါမယ်။ Made in Holland လို့ ရေးထားတယ်. ဝါတာပလူ: တာလာပတ်တွေကို ဟိုင်းကြီ:ကမ်:နားမှာ မြင်သာမြင်လိုက်ရပေမယ်. မကြင်လိုက်ရပါ။ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ထူ:ခြားတာက ဗီတာမင် အားဆေးပါ။ အဲဒီဆေးသောက်လိုက်ရင် ၂ရက်လောက် အစာမစားဘဲ နေလို့ရပါသတဲ.။ သောက်ကြည့်ချင်လိုက်တာနော်။
စင်္ကာပူက မကြီ:က ငိုနေပြီ: ပြန်လာတော.မယ် လုပ်နေလို့ ရန်ကုန်တက်ပြီ: သွာ:ပြောရသေးတယ်။ အင်တာနက်က သတင်းတွေကြည့်ပြီ: စိတ်ပူနေတာလေ။ စိတ်ပူလဲ ပူစရာပဲလေ။ ရန်ကုန်ရောက်မှ ဟိုင်းကြီ:က ရလာတဲ. မီးလောင်နာကို သူငယ်ချင်းဖြိုး အကူအညီနဲ. လှည်:တန်:ကုန်းဆင်းနာ:က ဆရာဝန်ကြီ:ဆီမှာ သွားပြရတယ်။ မီးလောင်နာက တဖြည်းဖြည်း ကြီ:လာတာ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်ပေးတယ်. ဆေးနဲ.လည်: မသက်သာပါဘူး။ ဆရာဝန်ကြီ:က သောက်ဆေးနဲ. သနပ်ခါးမှုန့်လိုကို လိမ်:ဖို. ပေးလိုက်ပါတယ်။ မပူမစပ်ဘဲ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပြီ: ပျောက်သွားပါတယ်။ ရေမသန့်လို့ ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တာပါတ.ဲ။ ရေကလည်: ဘယ်သန့်တော.မှာလဲ။ ဒီလောက် အများကြီ: သေထားတာကို။ မကြာခင်ကဘဲ နာဂစ်တိုက်တဲ. ဒေသက အန်တီတယောက်လည်း ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ လာကုသေးတယ်တဲ.။
မုန်တိုင်းတိုက်ပြီ: မကြာမှီ ပုသိမ်က အလှူရှင်တွေ ရေသန့်ဘူးတွေ လာလှူပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအိမွန်သန်.အဖေက ဝမ်:ရောဂါတွေ ဖြစ်နေတယ် ကြားလို့ ဆိုပြီ: အလှူမခံရဘဲ ဆေးတွေ ကိုယ်တိုင် လာလှူပါတယ်။ ဘုန်းကြီ:ကျောင်းကို ဌာနချုပ်လုပ်ပြီ: ကုသနေတယ်. ဆရာဝန်ကို လှူပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုတာ ထပ်မှာ ဆေးတွေ ထပ်လှူမယ်လို့ လှူတဲ.သူက သဒ္ဓါတရား ထက်သန်ပေမယ်. တို.ကိုယ်တိုင်က စင်္ကာပူကျောင်:ဝင်ခွင့်ရလို့အလုပ်များနေတာနဲ. အလှူခံဖို. ပျက်ကွက်ခဲ.တာပါ။ မကြီ:ကလည်: စင်္ကာပူက သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီက အလှူခံပြီ: ဆန်အိတ် ၂၀ လှူပါတယ်။ ဟိုင်းကြီ:တကျွန်းလုံးမှာ ရှိတဲ. ဘုန်းကြီ:ကျောင်းတွေကို လှူလိုက်ပါတယ်။ အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဆို ဘုန်းကြီ:ကျောင်းကိုပဲ ပြေးခိုကြတာလေ။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီ:တော.လည်: အိမ်မပြန်ရဲသေးတဲ. သူတွေက ဘုန်းကြီ:ကျောင်းမှာ နေကြပါတယ်။ သက်ကြီ:ရွယ်အိုတွေ၊ ဒဏ်ရာရတဲ.သူတွေကို ဘုန်းကြီ:ကျောင်းမှာပဲထားပြီ: ကုသပေးတာလေ။ စင်္ကာပူက မကြီ:သူငယ်ချင်း မြတ်သစ်မွန်ကလည်: သူ့အင်္ကျီအားလုံးကို လှူပါတယ်။ ပီနန်အိတ်နဲ. ၂ အိတ်တောင်။ မုန်တိုင်းနဲ. အတူပါသွားလို့ အဝတ်အစားက ရှားပါပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်တဲ.အချိန်မှာ တကယ်လိုအပ်တာတွေကို သဒ္ဓါတရားထက်ထက်သန်သန်နဲ. လှူဒါန်:ကြတဲ. အလှူရှင်တွေကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ပုသိမ်ကားပေါ်မှာ ကောင်မလေးတယောက် မျက်နှာက နီရဲနေလို. ဘေးကအန်တီက မေးကြည့်တာ သူ့မိသားစု၊ သူ့ဆွေမျိုးအားလုံး နာဂစ်နဲ.အတူပါသတဲ.။ သူတောင် ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်နေလို့ လွတ်တာတဲ.။ ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမှန်:တောင် မသိတော.ပါဘူး။ တို.အိမ်မှာလည်: စက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ. ဆိုင်ကို မောင့်မောင့်အတွက် ဖွင့်ပေးထားတာ။ ဆိုင်က မဆိုးပါဘူး။ ဖေ့ကကျွမ်:ကျင်၊ဆက်ဆံရေးလည်:ကောင်း၊ လိုအပ်တဲ. ပစ္စည်းတွေကို ရန်ကုန်ကနေ ၁ရက်တည်:အရောက် မှာပေးတဲ. ဝန်ဆောင်မူတွေကြောင့် ရောင်းရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မောင်မောင်က ဆိုင်မမြဲ၊ ဖေကလည်: သူ့စက်လှေတွေနဲ. အလုပ်များရတဲ.အထဲ ဆိုင်ပါ ထိုင်ပေးရတော. ပင်ပန်:လို့ ဆိုင်ကို ဖြုတ်ချင်နေတာ။ နာဂစ် ဖြုတ်မှပဲ ပြုတ်ပါတော.တယ်။ တချို.က ရှိတာလေးတွေ ရောင်းချပြီ: ပြန်လည်နာလန်ထူလာပေမယ်. တချို.ဘဝတွေကလည်: နာဂစ်နဲ.အတူ ပါသွားခဲ.ပါပြီ။ ဥစ္စာပစ္စည်းက ဆုံးရှုံးသွားရင် ပြန်ရှာရနိုင်ပေမယ်. အသက်ကတော. ဆုံးရှုံးသွားရင် ပြန်အစားထိုးဖို. မလွယ်ပါဘူ:။ နာဂစ်ကြောင်.ရတယ်. စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်: ကုစားဖို. အချိန်ယူရပါဦးမယ်။
လှူတဲ.သူတွေကို သဂြိုဟ်ပေးတဲ.သူကို ဖမ်:ဆီးတာ၊ ဒုက္ခရောက်သူတွေဆီ တိုက်ရိုက်လှူခွင့်မပေးဘဲ ရဝတ၊ မရက ကနေ လှူခိုင်းတာ၊ ဒုက္ခသည်တွေကို အတင်းနေရပ်ပြန်ခိုင်းပြီ: ဒုက္ခသည်မရှိတော့ပါဘူး ဆိုပြီးကြေညာတာ၊ သတင်းအမှောင် ချထားတာ၊ နိုင်ငံတကာကူညီကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ.တွေကို အဝင်မခံလို့ ဘန်ကီမွန်: ကိုယ်တိုင် ဝင်ဖြောင်းဖျမှ အဝင်ခံတာ စစ်အစိုးရရဲ. ယုတ်မာမှုတွေကို လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရလို့ ပြည်သူတွေမှာ အော့နလုံး နာရပါတယ်။ မြန်မာ့အတင်း သတင်းစာမှာ ဖော်ပြတယ်. သေဆုံးသူ အရေအတွက်နဲ. နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြတယ်. သေဆုံးသူ အရေအတွက် ကွာဟနေပေမယ်. သေချာတာကတော. လူအများကြီ: သေဆုံ:သွားတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီ: ဘေးလွတ်တဲ.နေရာမှာ ခိုလှုံနေရရင် အသေအပျောက် ဒီထက် နည်:မှာပါ။
ဂျပန်မှာ အခုလှုပ်တဲ. ငလျင်မျိုးသာ ရန်ကုန်မှာများ လှုပ်လိုက်ရင် ဘာပြောကောင်းလိမ့်မလဲ။ ဂျပန်မှာထက် အသေအပျောက်များမှာ အသေအချာပဲ။ ထိရောက်တယ်. ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှူ၊ မြန်ဆန်တဲ. ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ ပြည်သူအကျိုးအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ. အစိုးရကြောင့်သာ ငလျင် အားပြင်းပေမယ်. နာဂစ်လောက် အသေအပျောက်မများတာပါ။ နာဂစ်လိုမျိုး ဘေးအန္တရာယ်နဲ. မင်းဆိုးမင်းညစ်ဒဏ်မှ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ကင်းဝေးပါစေ။
(Pronounciation Class ချိန်မှာ ရလိုက်တယ်. အတွေးစလေးပါ။)
အင်တာဗျူးမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ. ဖြေရခက်တဲ. ဂျောက်ပေါက် မေးခွန်:လေးပါ။ အလုပ်ကြိုးစားတာ၊ နည်းပညာအသစ်တွေကို မြန်မြန်သင်ယူနိုင်တာ၊ teamwork လုပ်တတ်တာ ကိုယ်.အားသာချက်တွေကို ရွှန်:ရွှန်:ဝေအောင် ပြောနိုင်ပေမယ်. ကိုယ်.အားနည်:ချက်ကတော. အင်း ခက်သားလား။ ပျင်းတယ်လို့ အမှန်ပြောပြန်ရင်လည်: ကိုယ်.ကို ခန်.မှာမဟုတ်။ စိတ်တို ဒေါသထွက်လွယ်တယ်လို့ အမှန်ပြောပြန်ရင်လည်: မခန်.မှာ အသေအချာပဲ။ အားနည်:ချက် မရှိပါဘူး ဆိုရင်လည်: ယုံမှာမဟုတ်။ ကိုယ်.အားနည်:ချက်လည်: ဖြစ်ရမယ်၊ အလုပ်ကိုလည်: မထိခိုက်တယ်.ဟာ ဖြစ်ရမယ်။ ဦးနောတ်ကို နည်:နည်: အလုပ်ပေးလိုက်တော. မဖြစ်ညစ်ကျယ် အကြံညဏ်လေး ထွက်လာတယ်။ ဟင်းချက်မကောင်းဘူးလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ကိုယ်.အားနည်:ချက် အမှန်အကန်ပဲလေ။ ကိုယ်ဟင်းချက်ရင် တအိမ်လုံး ဘယ်သူမှ မစားနိုင်ဘူး။ နောက်တခါ ဟင်းမချက်ခိုင်းအောင် ပညာပြတာ။ အစွမ်:အစတွေ ဒိုင်လျှိုထားတာလို့ ကြုံးဝါးလိုက်သေးတယ်။ အင်တာဗျူးမေးတယ်.သူတော. မသိဘူး ကိုယ်ကတော. ကိုယ်.ဘာသာ သဘောတွေကျလို့။ တယ်တော်တယ်. စန်:ထွန်းပါလား အဟက် အဟက် အဟွတ် အဟွတ် ။
ပလမ် မရှိပါဘူး။ တို.က ပစ်စုတ်ပန် တည်.တည်.ပဲ တွေးတာ လို့ ပြောပြန်ရင် ခန်.မှာ မဟုတ်။ ရည်:မှန်:ချက် မြင့်မြင့်ထားတယ်.သူကိုပဲ ခန်.ချင်တာလေ။ တို.ရည်မှန်:ချက်က သူဋ္ဌေးဖြစ်ချင်တာလေလို့ ဖြေရင်လည်: မျက်ခုံးပင့်ကြည့်ခံရမယ်။ တို.ကတော. နောက်၂နှစ်ကြာရင် ISS က M.SE တက်မှာ SA ၊ PM လုပ်မှာလို့ ဖြေခဲ.တယ်။ တက်ချင်မှ တက်မှာလေ။ ကိုယ်မတက်လည်: သူဘာတတ်နိုင်လဲ။ ဟုတ်တယ်မလား။
အင်တာဗျူး၂၀လောက် ရခဲ.တယ်. အထဲမှာ ဒီလို ကြောင်တောင်တောင် ဂေါက်တောက်တောက် မေးခွန်း တခါ အမေးခံရဖူးတယ်။ ဘီယာသောက်ရင်း ကိုရီးယားကားကြည့်ပြီ: ရပါတယ်လို့ ပြောရင် မကောင်းဖြစ်ရော.မယ်။ မိသာ:စုကြောင့် ရပါတယ်လို့ ပြုံးပြီ: ဖြေခဲ.တယ်။ Offer ပေးရင်တောင် ဒီလို ကြောင်တောင်တောင် ဂေါက်တောက်တောက် ကုမ်မဏီမှာ မလုပ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲက ကြုံးဝါးရင်းပေါ့။
မြန်မာစကားသင်ယူနေတယ်. နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ဂျောက်ပေါက်ကတော. Pronounciation အခေါ်အဝေါ်တွေပါ။ English မှာတော I You နဲ. ပြီ:ပေမယ်. မြန်မာစကားမှာတော. သင်၊ နင်၊ ရှင်၊ မင်း၊ ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ၊တပြည်.တော်၊ တပြည်.တော်မ၊ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ နဲ. ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော. မပြီ:သေးပါးဘူ:။ အသက်အရွယ်အလိုက် ကိုယ်.ထက်ကြီ:ရင် အမ၊မမ၊အကို၊ကိုကြီ: ကိုယ်.ထက် ငယ်ရင် ညီမ၊ ညီမလေး၊ မောင်လေး၊ညီလေး။ ကိုယ်.အဖေအမေထက်ကြီ:ရင် ဘကြီ:၊ ကြီ:တော် ကိုယ်.အဖေအမေထက်ငယ်ရင် ဦးလေး၊အဒေါ် ခေါ်ရတယ်။ယောက်ျားလေးနဲ. မိန်:ကလေးအခေါ်အဝေါ်တွေက မတူပြန်ဘူး။ ကိုယ်.ထက်ငယ်တဲ. ယောက်ျားလေ:ကို မိန်:ခလေးက ညီလေးလို့ ခေါ်လို့ မရပါဘူး။ ယောက်ျားလေ:ကသာ ညီလေးလို့ ခေါ်ခွင့်ရှိတာပါ။ အရပ်ဒေသအလိုက် အခေါ်အဝေါ်တွေက ခွဲပြန်တယ်။ ဒွေးလေးလို့ ကိုယ်.အမေထက်ကြီ:သူ အမျိုးသမီးကို ခေါ်ပေမယ်. တချို.အရပ်ဒေသမှာတော. အမျိုးသားကို ခေါ်တာပါ။
English မှာတော. in-laws နဲ. အားလုံ:ပြီ:ပေမယ်. စကားလုံးကြွယ်ဝလှတယ်. မြန်မာစကားမှာတော. ခမည်:ခမက်။အကိုရဲ. မိန်:မကို ညီက မရီး၊ ယောက်ျာ:ရဲ. ညီကို မိန်:မက မတ်၊အစ်မရဲ. ယောက်ျာ:ကို ညီမက ခဲအိုလို့ ခေါ်ပြီ: မောင်ကတော. ယောက်ဖလို့ ခေါ်ရတယ်။ တကယ်လို့များ တယောက်ယောက်က ယောက်ဖလို့ ခေါ်ရင် သတိသာ ထားပေတော. အဓိပယ် ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ သင်.ရဲ. ညီမ အပျိုချောကို သကောင်.သားက ကြိတ်ပိုးနေတာနဲ. သူ့ရဲ. ညီမ အမအပျိုချောကို သင်.လက်ကို အပ်နေတာ။ ကရင်ဘာသာစကားမှာတော. သူငယ်ချင်းကို ယောက်ဖလို့ ခေါ်ကြတာ။ မယားညီအကို လင်ညီအမ ဆိုတာက ရှိသေးတယ်။ မယားညီအကို brothers by virtue of sisters ညီအမကြောင့် ညီအကို ဖြစ်တာ။ လင်ညီအမ sisters by virtue of brothers ညီအကိုကြောင့် ညီအမ ဖြစ်တာ။
UFL (University of Foreign Language,Yangon) မှာ ဘာသာရပ်တွေအလိုက် ၃၊၄လ တခါ ပြဇာတ်လုပ်ပါတယ်။ တရုတ်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊ထိုင်း၊ပြင်သစ်၊ English ပြဇာတ်တွေ ဆိုရင် သူတို.ဌာနအလိုက် အားပေးကြပေမယ်. မြန်မာပြဇာတ်ဆိုရင်တော. ရုံပြည်.ရုံလျှံ အားပေးကြပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်လို့ ဌာနေပြန်သွားတဲ. မြန်မာစာ ကျောင်းသားတယောက် အခန်:ထဲမှာ စာတကုပ်ကုပ်လုပ်၊ အခန်:နံရံမှာလည်: မြန်မာစာတွေ အပြည်.ကပ်၊ အိမ်သာသွားရင်တောင် အီးအီ:ကို ကောင်းကောင်း မပါနိုင် စာအုပ်တကိုင်ကိုင် လက်ကမချ ကြိုးစားရှာလို့ မိဘတွေခမျာ စိတ်ပူလာပါတယ်။ ဂေါက်သွားပြီလာ:ပေါ့။ ဒါနဲ.ပဲ ဦးနောက်ကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တယ်။ အောက်ကမျင့်၊ဝဆွဲ၊တချောင်းငင်၊နှစ်ချောင်:ငင်၊ယျပင့်၊ယျရစ်၊လုံးကြီ:တင်၊ဆံခက်တွေနဲ. ရှုပ်ပွနေတယ်. ဓာတ်မှန်အဖြေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
ချမ်:တာနဲ. အေးတာ တူပေမယ်. ရေချမ်:ချမ်:လေးတခွက်လို့ သုံးလို့မှ မရတာနော်။
(အသေးစိတ် ဖက်ချင်ရင် ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ. Colourful Myanmar တွင် ဖတ်ရှူနိုင်ပါသည်။)
မျက်ရည်ကျပြီ: ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်: မသိချိန်မှာ "ကိုသာထွန်းသမီးငယ် ညည်:အမေ လျှပ်ပြေးနဲ.ပါလာတယ်။ ကိုတဆုပ်အိမ် တက်သွားပြီ။ အဲဒီကနေ စောင့်နေ။"ဆိုတယ်. စကားကြားတယ်. အချိန်မှပဲ ဦးတဆုပ်အိမ်ကို အမြန်ချီတက်ရတော.တယ်။ လမ်:မပေါ် ထွက်မျှော်ရင်း ဆိုက်ကားပေါ်က မေကို မြင်ရတော.မှပဲ စိတ်သက်သာရာ ရတော.တယ်။ မိသားစုအားလုံး အခြေအနေ ကောင်းတယ်ဆိုမှပဲ စိတ်ဒုန်းဒုန်း ချနိုင်တော.တယ်။ ဟိုင်းကြီ:သတင်းလာမေးကြ။ ဘယ်သူအိမ်ကတော. ပြိုသွားပြီ။ ဘယ်သူက ဘယ်လို လွတ်အောင် ပြေးခဲ.ကြတာ သတင်းတွေ ဖလှယ်ကြ။ လိုတယ်.ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးမှာ မေနဲ.လိုက်ဝယ်။ ည၈နာရီ လျှပ်ပြေးနဲ. ဟိုင်းကြီ:ဆင်းခဲ.ကြတယ်။
မနက် ၅နာရီ ဟိုင်းကြီ:ကို အဝေးက မြင်လိုက်ရရင်ပဲ အတော်အံ.ဩသွားတယ်။ အမြဲစိမ်:စိုနေတယ်. ဟိုင်းကြီ:တောင်က ဘာအပင်မှ မရှိတော.ဘဲ တောင်ကတုံးကြီ: ဖြစ်သွာပါရောလား။ တွေ့လိုက်ရတယ်. မြင်ကွင်းတွေက စိတ်မချမ်:သာစရာ။ ဘယ်နေရာ ကြည်.ကြည်. အပျက်အစီး၊ ပြိုလဲနေတယ်. အိမ်တွေ၊ အမို:မရှိတယ်. အိမ်တွေ၊ပြိုလဲနေတယ်. အပင်တွေ၊ ကျွမ်:ထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်နေတယ်. သင်္ဘောတွေ၊ ဟိုးအဝေးကြီ: ကမ်:ပေါ်ကို တင်နေတယ်. သင်္ဘောတွေ။ ဘုရား ဘုရား ဒီလောက် ဆိုးရွားတယ်. မုန်တိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုများ အသက်ရှင်အောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်။
သင်္ဘောဆိပ်မှာ ဖေ့ကို မြင်လိုက်ရတဲ့ ခဏ အတော် ဝမ်:သာမိတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ၁၀နှစ်စာလောက် အိုစာသွားတယ်။ အိမ်ကို မြင်ရတော.မှ တော်ပါသေးရဲ..။ အမိုးမရှိတာက လွဲရင် ပြိုမသွားလို့။ စိတ်ကြိုက်မုန့်ကို စားတော. မုန့်မစားရတာ ၂ရက် ရှိပြီလို့ ဖေကပြောတော. စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ဆန်တွေက အကုန်ရေစိုသွားလို့ ရေစိုဆန်ကိုပဲ ချက်ပြုတ်ရတယ်။ ရေကို ဆူအောင်ကြို။ ရေပွက်ပွက်ဆူလာရင် ရေစိုဆန်ကို ထည်.။ ဝါကျင်ကျင် အရောင်နဲ. အရသာ မရှိ။ ကံကောင်းလို့ အိမ်မှာငပိအိုးက အကောင်းအတိုင်: ကျန်နေသေးတယ်။ မုန်တိုင်းပြီ:တော. ဘာမှစားစရာ မရှိလို့ ရေစိုဆန် နဲ. ငပိဖုတ်ကို စားရပါသတယ်.။ တချို.ကတော. ရေစိုဆန်ကို မုန်.ဖတ် လုပ်စားကြသတယ်.။ ဆန်အကောင်းက မရှိ၊ ရှိတယ်. ရေစိုဆန်ကိုလဲ ဝဲမပစ်ရက်လို့လေ။
ရေက အိမ်ပေါ်မှာတင် ရင်ခေါင်းလောက် ရောက်တယ်။ ရေအလွန်ဆုံ:ကြီးရင် အိမ်နောက်ဖေ: တံတားမြုပ်ရုံပါပဲ။ မာလာမုန်တိုင်းတုန်းကတောင် အိမ်ပေါ် ဒူးဝက်ပဲ ရေရောက်တာ။ ခုတော. အိမ်ပေါ်မှာတင် ရေက ရင်ခေါင်းရောက်တယ် ဆိုတော. ဟိုင်းကြီ:တကျွန်းလုံးမြုပ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါလား။ မာလာမုန်တိုင်းတုန်းက မေ့ထမီသေတ္တာ ရေမြုပ်သွားတာ မသိလိုက်လို့ ကုန်သွာ:ပါရောလား။ ဒီတခါတော. မှတ်မှတ်ရရ အဝတ်အစားတွေ၊စောင်၊ခေါင်းအုံး၊ခြင်ထောင်အားလုံးကို အပေါ်ထပ်ကို အကုန်ပစ်တင်ပြီ:တော.မှ ပြေးကြတာ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျန်တာ။ အပေါ်ထပ် တင်ထားတယ်. ဆန်အိတ်၂၀ကတော. အမိုးကျွတ်ထွက်သွားလို့ စိုတာပါပဲ။ အောက်ထပ်မှာ ရှိတယ်. စက်ပစ္စည်းဆိုင်နဲ. အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေကတော. အကုန်ကုန်တာပါပဲ။
မုန်တိုင်းတိုက်မှာ ဖေတို.သိလား ဆိုတော. သိတယ်တယ်.။ ဘယ်လိုသိတာလဲ ဆိုတော. ရေဒီယိုက ကြေညာတယ်တယ်.။ နိုင်ငံခြားသတင်းလုံးတွေက သေသေခြာခြာ ကြေညာပေးတယ်။ မေ၁ မုန်တိုင်းမတိုက်မှီ ညက ရေ၁၀ပေလောက်တက်မှာ မို့ သတိဝီရိယ ရှိကြဖို လော်နဲ. လိုက်အော်ပါသတယ့်။ ဟိုင်းကြီ:မှာ ပမ္မဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ရှိပါတယ်။ ဖေတောင် ညဖက် ရေတက်မတက် ဆင်းကြည်.ပါသေ:သတယ်.။တကယ် ဆော်တာက မေ၂မှာ။
ရေဒီယိုကနေ ကြေညာနေပေမယ်. ဒီလောက်တိုက်မယ်မှန်: ဘယ်သူမှ မထင်ထားတာပါ။ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတောင် ဒီလောက်တိုက်မယ် မထင်လို့ မဲပေးဖို.ပဲ အရေးတယူ ကြေငြာနေတာ။ မုန်တိုင်းမတိုက်ခင်၂ရက်လောက်ကတည်:က အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက စစ်အစိုးရကို သတိပေးနေတာပါ။ ဒီလောက် လူအများကြီ: သေရတာ စစ်အစိုးရက ပြည်သူတွေအပေါ် သတင်းအသေအချာ မပေးခဲ.လို့၊ဘာမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူ မရှိခဲ.လို့ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ လူတိုင်း သိပါတယ်။ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတယ်. သူရယ်၊ မသိတယ်. လူနည်:စုက လွဲရင်။
မေ၂ နေ့လည်၁၂နာရီမှာ မုန်တိုင်းစတိုက်ပါတယ်။ မေနဲ. ဘိုးဘိုးကို ဘုန်းကြီ:ကျောင်းပို.ပြီ:တော. အိမ်မှာ ဖေနဲ.ထမင်းချက် လှဌေးတို.က စောင့်နေ။ နေ့လည် ၂နာရီ ဖေ့ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်. အချိန် တကယ် ဆော်နေပါပြီ။ ကောင်းကင်က ညအလား မဲမှောင်နေပါတယ်။ တိုက်လိုက်တယ်.လေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို. နေနေသာသာ ကျောပေးထားရတယ်။ ရေကလည်: မုန်တိုင်းရှိန်ကြောင့် တရိပ်ရိပ်တက်လာပြီ။ လေကလည်: တိုက်လိုက်တာ နေလို့ မရအောင်ကို တိုက်တာ။ အစက အိမ်တံခါး ပိတ်ထားတာ။ နောက်တော. တံခါးဖွင့်လိုက်ရတယ်။ မဖွင့်ရင် အိမ်ပြိုမှာလေ။ ဒီရေက ဒိုးယိုပေါက် အိမ်မှာ ရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေကို အကုန်တိုက်ချသွားတောပါပဲ။ လေက ဘယ်လောက်တောင် ပြင်းသလဲဆိုရင် အိမ်ခေါင်မိုးက တချပ်ချင်း ကွာတာ မဟုတ်ဘဲ ကျားကန်ထားတယ်. ထုတ်တန်:တွေပါ ဝှီးကနဲဆို အကုန်အမိုးရော ထုတ်တန်:တွေပါ ကျွတ်ထွတ်ထားတာ။ အမိုးကျွတ်ပြီ: အိမ်ပြိုမယ် ထင်တော.မှ ဖေနဲ. လှဌေ:က ဘုန်းကြီ:ကျောင်းဆီ ကူးကြတော.တာ။
ဘုန်းကြီ:ကျောင်းနဲ. အိမ်က လမ်:လျှောက်ရင် မိနစ်၂၀ လောက် ဝေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရေက အိမ်ပေါ်မှာတင် ရင်ခေါင်းလောက် ရောက်နေပါပြီ။ လွင့်လာတယ်. ဖိုင်ပါပုံးတွေ၊ သစ်တုံးတွေ၊ မျောလာတယ်. သင်္ဘောတွေ ရှောင်ရှားရင်: ရေကူးရင်း ပြေးရတာပါ။ လေတအာ:တိုက်ရင် အိမ်တွေမှာ ခိုနေ၊ ဘုန်းကြီ:ကျောင်းဆီ ခိုဖို. ပြေးလာသူတွေ အချင်းချင်း စုပြီ: ပြေးကြတာပါ ။ လွင့်လာတယ်. သွပ်ချပ်တွေ၊ ပြိုလဲတယ်. အပင်တွေ၊ အိမ်တွေကို ရှောင်ရှားရင်း အသက်ကို ဖက်နဲ.ထုပ် ပြေးကြရတာ။ သာမန်ချိန် မိနစ်၂၀ ခရီးက အခု အချိန်မှာတော. ၁နာရီမက ကြာနေမှာပါ ။ ဘုန်းကြီ:ကျောင်းမှာ စောင့်နေတယ်. မေ့မှာလည်: လည်တမော့မော့နဲ. စိတ်ပူနေရှာတာ။ အိမ်နီးချင်းတွေ ရောက်လာတိုင်း နင့်ဦးလေးတွေ့ခဲ.လား မေးရတာ အမော။ ဦးမောင်မောင်ကလည်: သူတို.ရုံပြိုသွားလို့ ရေကူးပြီ: ပြေးလာတာ ဆိုတော. မေ့ရဲ. စိတ်ပူမှူက ဂိတ်ဆုံ:ရောက်သွားပြီ။ အချိန်ကြာတာနဲ. စိတ်ပူလွန်:လို့ ကိုဆန်:ဝင်းကို လွှတ်တယ်.အချိန် ဖေရောက်လာတော.က ဖေ့ရင်ခွင်ကို လက်သီးနဲ. ထုရှာတယ်။ အသက်ထက် ပစ္စည်းက အရေးကြီ:သလားပေါ့။
ဘီဘီစီက မုန်တိုင်းက ည၆နာရီ ပြီ:မယ်ဆိုလို့ နာရီ ကြည်.ပြီ: ၆နာရီထို:ပါတော.လို့ ဆုတောင်းရတာ။ တရွာလုံးက မုန်တိုင်းလာခိုကြတော. ကျောင်းပြိုမှာလည်: စိုးရသေးတယ်။ ဘီဘီစီက ပြောတယ်.အတိုင်း ၆နာရီမှာ မုန်တိုင်းတကယ် စဲပါတယ် ။ ကိုယ်အိမ်ပြန်ကြသူတွေ၊ ကြောက်လို့ မပြန်ရဲဘဲ ဘုန်းကြီ:ကျောင်းမှာပဲ ဆက်နေကြသူတွေ ။ ရွာလမ်:ကတော. လမ်:ကောင်းကောင်း လျှောက်လို့မရလို့ တုတ်ကိုင်ပြီ: လျှောက်ရပါသတယ်.။ ကိုသေးတို. ကုန်စုံဆိုင်မှာတော. တောကြောင်တွေက မျက်နှာဖုံ:စွပ်ပြီ: ယူနေတာ ကိုသေးမိန်:မက ကြိုက်သလောက်ယူ၊ လူကို အန္တရာယ် မပေးနဲ.၊ နင်တို.ကိုလည်: ဘာမှ မလုပ်ဘူး။ မုန်တိုင်းတိုက်ချိန် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မီး စောင်တွေကာပြီ: အရေးပေါ် ကလေးတယောက် မီးဖွားပါတယ်။ မုန်တိုင်းပြီ: နောက်နေ့မှ အေးအေးဆေ:ဆေ: မွေးမယ်လို့ အောင့်ထားလို့မှ မရတာ။ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်: နာမည်ပေးရှာတယ်။ နာဂစ်လေးတယ်.။
မုန်တိုင်းတွင်းမှာ အုန်းပင်ပိလို့ သေတယ်. ကောင်းလေးရယ်၊ ယောက်ခမ၊ ချွေးမ၊မြေးမလေး မိန်:မတွေ သေသွားပြီ: ယောက်ကျားတွေပဲ ကျန်ခဲ.တယ်. မိသားစုရယ် အပျက်အစီး အဖိတ်အစင် ၁၀၊၁၅ ယောက်လောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ မိန်:မတွေ သေသွားတယ်. မိသားစုက အစွန်မှာ ရှိတာ။ အိမ်ပြိုမှ ပြေးတော. မမှီတော.တာ။ သူတို. ရွှေထုပ်ကို ရှယ်ရုံ နောက်မှာ တွေ့လို့ ပြန်ပေးရှာပါတယ်။
ဥစ္စာပစ္စည်း နည်:နည်:ရှိတယ်. သူက နည်:နည်: ဆုံ:တယ်၊ များများရှိတယ်.သူက များများ ဆုံ:တယ်။ ပစ္စည်းဆုံ:တာကိုတော. စာမဖွဲ.တော.ပါဘူ:။ အဓိကက အသက်။ အသက်က အရေးကြီ:တာ။ အသက်ရှင်နေသေးရင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆိုတာ အချိန်မရွေး ပြန်ရှာလို့ ရတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီ:သွားပေမယ်. ဒုက္ခတွေက မပြီ:သေးပါဘူး။